China Cultural Stone-VNS-014BCB fanamboarana sy orinasa | LONGSHAN
Vahaolana malalaka / tsy mitongilana
1. Mora ny mametraka azy, ary miaraka amin'ny p ...
Ho an'ity vokatra ity dia antsoinay ihany koa hoe pa fotsy fotsy ...
Iray amin'ireo vokatra malaza indrindra ao amin'ny sto ...
Ity takelaka birao voajanahary voajanahary ity dia misy ...
Miovaova loko ity vokatra ity, tena tsara tarehy ...
Anaran-javatra: Multicolor Wall Cladding Panel manify
Habe:100X360MM / 100X350MM
Lanja: 27KG / M2
1. Vato vita amin'ny rindrina manify vato dia vato lava voaravaka lamina. Izy ireo dia mifatotra tsara kokoa ampiasaina amin'ny lamba firakotra ivelany sy ny firafitry. Ny karazana tile dia misy fifangaroana mitovy loko fototra, izay manampy fahalianana ary koa mamorona ny fahatsapana vato voajanahary tsy manam-paharoa.
2. Ny volavolan'ny Panel Wall Wall dia azo ovaina arakaraka ny fampiharana mazava tsara na ho an'ny trano na ho an'ny trano. Ny karazan-tsafidy loko ary mifanaraka amin'ny filan'ny endrika hafa.
Ny rafitra fananganana vato voajanahary dia mety amin'ny fampiasana ivelany sy anatiny. Tonga amin'ny endrika maodely izy ireo ary mailaka sy mora apetraka. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny rindrina misy endrika, manodidina ny pisinina, tokotanin-tany, faritra fialamboly, fitoerana amam-bato voajanahary ary fisehoan'ny rano.
Fanamarihana amin'ny fividianana vokatra
1. Azafady azafady ny lesoka haben'ny + -2mm, satria tapaka amin'ny tanana izy io, apetraho azafady ny baiko raha tsy maninona ianao, misaotra anao noho ny fahazoanao
2. Azafady azafady azafady fa ny loko dia mety ho hafa kely noho ny loko voajanahary.
1. Nahoana no mifidy antsika?
a. Ny orinasanay dia nandalo ny fizahana ny BV, ny vokatra dia ny ambaratonga B.
b. ISO9001: mari-pahaizana 2015
d. Manana ny ekipanay QC izahay, afaka miantoka ny kalitaon'ny vokatra izahay.
d. Ny orinasanay dia namatsy ADEO 、 KINGFISHER 、 RONA 、 OBI sy HOMEDEPOT nandritra ny taona maro.
2. Firy ny mpiasa ao amin'ny ozinao?
Ny mpiasanay dia manana mpiasa 99
3. Oviana no niorenan'ny orinasanao?
Ny orinasan-tsika dia niorina tamin'ny taona 1988, manana tantara mihoatra ny 30 taona izy.
4. Inona ny seranan-tsambo?
Xingang, Tianjin, Sina
5. Inona ny ora fanaterana?
Amin'ny ankapobeny 15 andro dia afaka mameno kaontenera iray taorian'ny nahazoana vola.
Ny fonosana mahazatra dia 12pcs / boaty, boaty 112 / pallet, 20pallets / container.we afaka mifanaraka amin'ny fangatahanao ny manangona.
Raha manana fanontaniana momba ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay ara-potoana, hanome valiny mahafa-po anao izahay, avelao ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjonay ary manantena ny fanontanianao izahay. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mailaka izahay:longshanshi@vip.126.com
Teo aloha: Simenitra Vato-VNS-1120CZ
Manaraka: Vato ara-kolontsaina-VNS-1308HWCB
Amin'ny ho avy, Longshan Stone dia hanaraka hatrany ny fitsipiky ny 'fitondrana ny olona amin'ny fahitsiana ...
Ankehitriny Longshan Stone dia nandefa azy io tany an-tsena, ary nahazo laza tsara be.